Lionel Messi oo ka Fariisanaya Cayaaraha Caalamiga ah iyo Sir ku saabsan Saameynta uu kuleeyahay Xulshada Xulka Argentina | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Published on June 23, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(24-6-2018) Xiddiga xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi oo dhibaato badan kala kulmay Koobka Adduunka gaar ahaan kulankii masiibada ku noqday ee Croatia ay ku burburisay 3-0 iyo ciyaartii ka horreysay ee Iceland ay barbar-dhaca kula dhamaysatay ayaa la sheegay inuu ka fadhiisanayo xulka qarankiisa isla marka uu dhamaado Koobka Adduunku.
Sida uu sheegay wariye si weyn looga ixtiraamo waddanka Argentina oo lagu magacaabo Fernando Niembro, Lionel Messi ayaa degdeg u shaacin doona hawlgabnimada xulka marka ay dib ugu laabtaan dalkooda haddii ay ka hadhaan Koobka Adduunka iyo haddii ay meel fiican ka gaadhaanba.
Wariye Niembro waxa uu tilmaamay in Lionel Messi uu gacanta ku hayo xulka qaranka oo uu isagu maamulo, isla markaana uu soo xusho laacibiinta ciyaaraya iyo kuwa la fadhiisinayo, hase yeeshee dhibaatadiisu tahay in aanu waxba qaban karaynin marka loo eego sida uu Barcelona ugu shaqeeyo.
“Messi ayaa iska leh xulka qaranka. Isaga ayaa tababare ka ah, waxaanu go’aamiyey in saaxiibaddii ay ciyaaraan, waana tan natiijada laga dhaxlo saaxiibbadu. Koox liidata, koox aan ahayn sidii ay wax ku noqon kari lahayd, koox bilaa qalbi ah.” Sidaas ayuu yidhi wariye Niembro.
Wariyuhu waxa uu ku eedeeyey Lionel Messi in xulistii hore ee ciyaaryahannada iyo sida loo safayo xiddigaha garoonka gelayaba uu go’aankeeda leeyahay, isla markaana uu yahay tababaraha oo Sampaoli aanu waxba ahayn.
“Way ku filan tahay Mascherano, saaxiibaddaa, way ku falantahay Sampaoli iyo kasoo horjeedka, way ku filantahay cadaadiska aad saartay, way kugu filan tahay maamulka bilaa qorshaha ah. Runtuna waxay tahay, marka uu Messi ka dhaqaaqo xulka Argentina, mana xuma haddii aannu mar kale ku fikirin inuu soo laabto” Sidaas ayuu yidhi wariye Niembro oo ka mid ah saxafiyiinta sida weyn looga ixtiraamo gudaha waddanka Argentina.
Lionel Messi ayaa intii aanu Koobka Adduunku bilaaban waxa uu warbaahinta u sheegay inuu ka fadhiisan doono xulka qaranka haddii uu ku guul-darraysto inuu Koobka qaado.